編輯精選 - Hello 醫師
Hello Health Group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဗဟုသုတမျှဝေခြင်း၊ ယုံကြည်ရသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အချက်အလက်များကို လူထုသို့ရောက်ရှိစေရေးနှင့် ပိုမို ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘ၀တည်ဆောက်နိုင်ရေးတို့ကို ပြုလုပ်ရာတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဖြစ်သည့် Hello Basci ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅ခုနှစ်၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ ဧပြီလ၌ Hello Sehat ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ် သြဂုတ်လ၌ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် Hello Doktor ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ဒေသတွင်းနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချဲ့ထွင်ခြင်းများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဦးမည်ဖြစ်သည်။
သင့်အနေဖြင့် သင်နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အ၀န်းအ၀ိုင်းအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်လိုပြီး Hello Sayarwon အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်လိုသည်ဆိုပါက သင်၏အလုပ်လျှောက်လွှာကို [email protected] သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Hello Health Group asapart of our goal of health care knowledge sharing, Trusted information reached the public health and to promoteamore healthy life to0by lead can build. Our first communication network such as Hello Basci was founded in 2015 in Vietnam. Then, in April 2016 in Indonesia in August 2016 were able to establish Hello Sehat Hello Doktor Malaysia established. Next, through the regional and global expansion will continue.
0 and the environment you live in, you need to be repaid0Bhutan If you would like to participate asamember of Hello Sayarwon send your job application [email protected] apply.